Indawo yokuhlala entle esembindini womhlaba - I-Airbnb
Indawo yokuhlala entle esembindini womhlaba
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguLuc
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uLuc iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ICueva Las Yeseras yindawo yokuhlala ekumgangatho ophezulu, eneebhedi ezisi-8. Yenziwe ngegumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nomabonwakude, ikhitshi eligcweleyo, i-terrace enkulu eneveranda kunye namagumbi okulala amabini amabini. Ngamnye unegama lesityalo esifana nembonakalo yomhlaba esentlango ejikeleze umqolomba.
VTAR / GR / 01183
Emqolombeni, igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala (elinebhafu, ishawa, isomisi seenwele, itawuli eshushu). Zonke iibhedi ziphindwe kabini. Onke amagumbi anezifudumezi eziphakathi, iTV, iDVD player. Amagumbi amabini anendawo yawo yomlilo.
Kulo mqolomba unako ukonwabela i-sauna ye-infrared kunye nomfundi we-CD, indawo yamanzi ukusuka kwingqele ukuya kushushu kwaye ngokuphambeneyo, igumbi elincinci lokuphumla eline-loft apho unokungqengqa khona kwaye ubone i-landscape.
Umqolomba wenzelwe amaqela abahlobo okanye iintsapho ezifuna ukudibana kunye zibe nenketho eyoyikisayo yokukwazi ukugcina ubumfihlo babo kwaye bonwabele iindawo ezizodwa ngaxeshanye.
Umgama omfutshane ukusuka kwindawo yokutyela iAl Jatib apho unokungcamla izitya zengingqi kunye neMoor kwaye wonwabele ibha, ivenkile yeti kunye nomqolomba wabantwana.
Kufuphi unokuzintywilisela kumanzi ashushu eHammam Al Jatib kwaye wenze i-massage okanye unyango lwetshokolethi, udongwe, ilamuni ...
Umbuki zindwendwe ngu- Luc
Inombolo yomthetho: VTAR/GR/01183